Android သတင်းများ - ထုတ်ဝေမှုများ၊ သတင်းများ၊ ကောလာဟလများနှင့်အခြားအရာများ! | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂၄)
Acer ၏တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သော Iconia A500 Tab ကို Best Buy တွင်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်
erပြီ ၉ ရက်သောကြာနေ့မနက်မှ စတင်၍ Acer Iconia A9 Tablet ကိုဒေါ်လာ ၄၅၀ ဖြင့်ကြိုတင်မှာကြားရန်အတွက် BestBuy.com ကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Android 500 ဖြင့်အသုံးပြုသည်
Android အတွက် Pandora ရေဒီယိုသည်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြစ်သောကျား၊ မ၊ မွေးသက္ကရာဇ်ကိုဒေတာထုတ်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာဆာဗာများသို့ပေးပို့ခြင်း
သင့်အား SMS အမြောက်အများဖြင့်သစ္စာဖောက်စေသော Android app malware သည်တိုက်ခိုက်ခံရသည်။
Walk & Text အတွက် Android အတွက် Malware ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားကြီးမားသော SMS ပို့ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏အော်ပရေတာ၏နောက်ကျောလွှာတွင်သင့်အား“ ကျိုးပဲ့” စေနိုင်သည်။ !
ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာရာတိုင်းဟာစမတ်ဖုန်းတွေအတွက်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက် Google မဟုတ်ဘူး
Android သည်စမတ်ဖုန်းများအတွက် OS ဈေးကွက်ကို ၂၀၁၅ တွင်လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
IDC ၏ဈေးကွက်လေ့လာချက်အရ Android သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ RIM OS BlackBerry မဟုတ်၊ Apple iOS မဟုတ်ဘဲ Windows Phone ဖြစ်သည်
Widgetsoid၊ သင့် Android အတွက်ဝစ်ဂျက်များလိုအပ်သည်
ခလုတ်မပါဘဲကီးဘုတ်ကို Snapkeys ။ ဒါကအနာဂတ်ရဲ့ကီးဘုတ်ဖြစ်မလား။
တစ်မိနစ်ကိုစာလုံး ၆၀ ကနေ ၁၆၀ ကြားမှာရေးဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။
ကောလဟာလ။ Sony သည် Vaio netbook ကို Google Chrome OS ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
Sony ကုမ္ပဏီသည် Google Chrome OS နှင့် NVIDIA Tegra2ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Sony Vaio Vaio laptop ကိုတီထွင်မည်ဖြစ်သည်။
ကွမ်းခြံကုန်း။ သင်၏ကင်မရာနှင့်သင်၏ Android ဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုပါ။
သင်၏ android ပေါ်ရှိဂရပ်ဖစ်ဘာသာပြန်ချက်
Xperia X2 အတွက် Android 2.3.3 ဖြင့် CyanogenMod RC8
Sony Ericsson Xperia X8 တွင် XDA ၏ကျေးဇူးကြောင့် Gingerbread ပါဝင်သည်
Asphalt5HD နှင့် NOVA HD အခမဲ့ဆမ်ဆောင်းအက်ပ်များပေါ်တွင်
Samsung App တွင် Asphalt5နှင့် NOVA တို့ကိုအခမဲ့ရယူပါ
Android 2.4: Gingerbread သို့မဟုတ် Ice Cream update?
Android 2.4 ကိုinပြီလတွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်နွေရာသီတွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီး Gingerbread ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိမ့်မည်ဟုယခင်ကကြေငြာခဲ့သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
Xtreamer PVR, မာလ်တီမီဒီယာစင်တာကို Android ။
Cebit တွင်နှင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များတွင်တင်ဆက်ထားသော android နှင့်အတူ Xtreamer PVR Multimedia စင်တာ။
Leds Hack, မင်းရဲ့ Android မှာမီးကိုပိတ်ပါ
Android Leds Hack အတွက်အစီအစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
CyanogenMod ROMs အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Rendering
Cyanogen roms အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု Rendered
Android အတွက် Nintendo DS emulator (beta phase တွင်)
Android အတွက် Nintendo DS emulator ။
Android ဗားရှင်း ၂ အတွက်စီးရီး - RC2 ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြိုက်သလား "စီးရီးအတွက် Android" အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်လက်လွတ်မခံနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဗားရှင်း 2.0 ဗားရှင်းလာမည့်ဖြန့်ချိ
Cludlist, သင်၏စျေးဝယ်လှည်းကိုမိုto်းတိမ်ထဲသို့တင်ပြီးမည်သည့်အရာမှမစွန့်ဘဲဝယ်ယူရန်အတွက် Application ကို Cloud ပေါ်သို့တင်လိုက်ပါ။
HTC Tattoo မေ့သွားတယ်
HTC ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် Tattoo နှင့် Android 2.1 သို့ Android မွမ်းမံမှုများမည်သည့်အခါမျှမရောက်ရှိခဲ့ပါ
Android ကိုရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက် -
လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်သူကမေးချင်သည်မှာ - ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းတွင်မည်သည့် Operating System ကိုငါလိုချင်သနည်း။ 10 Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ
သူတို့ကမိုက်ကရိုဆော့ဖ Kinect ကို Android စက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စီမံသည်
သူတို့ကမိုက်ကရိုဆော့ဖ Kinect ကို Android စက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်စီမံထားတယ်။
Android တွင်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ် (Trojan) အသစ်!
Android မှာ HongTouTou လို့ခေါ်တဲ့ Trojan virus အသစ်ကိုတွေ့တယ်။ LookOut လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကမိုဘိုင်းစနစ်အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုစျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ ရလဒ်များကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ သင်သည် SMS ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Valve သည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး လျှင် Google နှင့် Apple ထက်ငွေပိုထုတ်ပေးသည်
Valve ၏စီအီးအို Gabe Newel နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Android အတွက် Plex !! အချိန်ကောင်းပဲ !!
Android အတွက် Plex ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
Motorola Droid X2 အသစ် (အင်္ဂါရပ်များ)
2Gh dual-core Tegra2ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Motorola Droix X 1 အသစ်၏အင်္ဂါရပ်များ ၄.၃ လက်မဖန်သားပြင်၊ 4,3-megapixel ကင်မရာ၊ HDMI output၊ HD ဗီဒီယို။ ၂ ဝ ၁၁ ခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ဖြန့်ချိမည်။ Android 8 Gingerbread ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်။
Motorola က၎င်း၏ Motorola PRO ကိုတင်ပြသည်
Motorola သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ကိုဘာစီလိုနာ MWC ပြပွဲတွင်၎င်း၏မော်ဒယ်အား Motorola PRO နှင့်အတူပြသခဲ့သည်။
NOKIA သည် ANDROID အပေါ်စစ်ကြေငြာခဲ့သည်
Android သည်ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ နေရာတွင်ရပ်တည်နေသည်။ MWC 1 တွင် Microsoft ၏ Windows Phone 2011 Operating System နှင့်အတူ Google ၏ OS ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အကယ်၍ Nokia မကောင်းခဲ့လျှင်ယခု ပို၍ ဆိုးလာလိမ့်မည်။
MWC မှ Sony-Ericsson
Sony-Ericsson သတင်းကိုဘာစီလိုနာ၊ ၂၀၁၁ ကမ္ဘာ့မိုဘိုင်းကွန်ဖရင့်တွင်
Umeox Apollo သည်ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သော Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Umeox Mobile သည်ပထမဆုံးသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် MWC တွင်အလုပ်လုပ်သော Android စမတ်ဖုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
သင်၏ Galaxy Tab Free အတွက်ကီးဘုတ်ယူပါ
Samung ပရိုမိုးရှင်းက Galaxy Tab Keyboard ကိုလက်လွှတ်လိုက်ပြီ။
Htc Sync ကိုအဆင့်မြှင့်ထားပြီးယခုအခါ Htc Android စမတ်ဖုန်းအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Htc Sync သည်အဆင့်မြှင့်မှုတစ်ခုရရှိပြီး ဖြစ်၍ ထုတ်လုပ်သူ၏ android မော်ဒယ်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်
SMS ပေးပို့ခြင်းသည် Android အမှားနှင့် ပတ်သက်၍ ဂူဂဲလ်ကတုံ့ပြန်သည်
ဂူဂဲလ်မှကြေငြာချက်တစ်ခုအရ SMS ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြwithနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းအာမခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Nokia ၌ Android ရှိပြီး Gingerbread သည် Nokia N900 တွင်အလုပ်လုပ်သည်
တရား ၀ င် Android သို့ Nokia သို့တရားဝင် ၀ င်ရောက်လာခြင်း၊ အစိမ်းရောင်စက်ရုပ်လည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို Nokia N900 တွင်ကောင်းမွန်စွာတွေ့မြင်နိုင်သည်
ကျွန်တော်တို့ Android Archos 101 တက်ဘလက်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးပြီ
Archos 101 Android တက်ဘလက်ကိုရက်အနည်းငယ်အကြာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းကိုသင်ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခဲ့ပါတယ်
Gingerbread Live Wallpaper ကိုသင်၏ Nexus One တွင်တပ်ဆင်ပါ
Gingerbread ကာတွန်းကားသစ်များကိုသင်၏ Nexus One တွင်တပ်ဆင်ပါ
Android ဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ IOS ကနေတစ်ဆင့်တိုးတက်နေပါတယ်
Android သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Apple ၏ IOS မှသုံးစွဲသူများ၏အစုရှယ်ယာများကိုဆက်လက်ရရှိခဲ့သည်။
Htc Desire HD ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေထင်လဲဆိုတာပြောပြပါမည်
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Htc Desire HD ကိုစမ်းသပ်ပြီး Froyo ပါ ၀ င်သည့် Android စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားမိသည်ကိုပြောပြပါမည်။
AppsBuilder.com၊ သင်၏ Android အက်ပလီကေးရှင်းကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖန်တီးပါ
appsbuilder ဖြင့်ပရိုဂရမ်ဗဟုသုတမရှိဘဲရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android application ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
Samsung Galaxy Tab, ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးငါတို့ထင်မြင်ချက်ကိုပေး၏
Samsung Galaxy Tab ကိုရက်အနည်းငယ်လောက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါ၊
Gingerbread သို့ပထမဆုံးအဆင့်မြှင့်ပါ။ သင်၏ Nexus One ကိုအဆင်သင့်လုပ်ပါ
Gingerbread update ကိုပထမဆုံးလက်ခံရရှိရန် Nexus One ကိုပြင်ဆင်ပါ
သင်၏ Nexus Ones များကို Gingerbread အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပြင်ဆင်ပါ
OHA မှ၎င်း၏အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ထံမှအလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များထွက်ပေါ်လာပြီး Gingerbread သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်၏ Nexus One ကိုပြင်ဆင်ပါ။
လျှို့ဝှက် SMS Replicator, Android Market မှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည် application
Android Market တွင်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အတွက်သော်လည်းကောင်းအသုံးဝင်သော application အမြောက်အမြားကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Angry Birds ရှိအမှားတစ်ခုကသင့်အားသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်
Angry Birds ဂိမ်းတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အမှားတစ်ခုကသင့်အားဂိမ်း၏အဆင့်အားလုံးကိုသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်
Android 2.5, Gingerbread 3.0 မွာ Android 2.3 ဖြစ်သည်
Gingerbread ဟုလူသိများသော Android version မှာ Android 2.3 ဖြစ်သည်
Android 3.0, Honeycomb, T2, Samsung, ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကောလဟလသတင်းများထွက်ပေါ်
ယခုအချိန်အထိ Gingerbread, Samsung နှင့်သူတို့၏ terminal များ၊ Android 3.0 နှင့်အတူတက်ဘလက်များရောက်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟာလများစွာထွက်ပေါ်နေသည်။
သင်၏ Android ဖြင့် Tetris ကိုကစားပါ
ငါ Tetris နှင့်အတူမှတ်မိမည်မျှ! တဖန်ငါနှစ်ပေါင်း 30 အထက်သို့လည်းလျှင် ...
စတိဗ်ဂျော့ဘ်က Android ကိုစသုံးသူတိုင်းကိုတိုက်ခိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့က Apple သည်ရလဒ်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီးစတိဗ်ဂျော့ဘ်ကိုလူတိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အခွင့်ကောင်းယူပြီး Android မှစတင်ခဲ့သည်
တရားဝင် Android 2.2 Rom ဖြစ်သော Htc Magic / MyTouch 3G ရရှိနိုင်သည်
Android 2.2 update ကို Vodafone Htc Magic အတွက်ရရှိနိုင်သည်
Android 2.1 နှင့် Windows7ပါသည့် netbook တစ်ခုဖြစ်သည်
Android 2.1 နှင့် Windows7operating system ပါ ၀ င်သည့် dual-boot netbook တစ်ခုဖြစ်သည့် Acer သည် Acer ကိုရောက်ရှိလာပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Android Market ဗားရှင်းအတွက် Android 2.1 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
operating system ဗားရှင်း ၂.၁ အတွက် Android Market application ကို Google စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
€0မှ Vodafone စပိန်နှင့် HTC Desire HD နှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလွတ်များသာ Htc Desire Z နှင့်အတူ
Vodafone သည်စပိန်နိုင်ငံတွင် Htc Desire HD နှင့် Htc Desire Z တို့၏စျေးနှုန်းကိုတင်ပြခဲ့သည်
Android ဆိုတာအသုံးများတဲ့နာမည်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်ကနေလာတာလဲသိလား။
Qualcomm မှ Android အတွက် Augmented Reality SDK ကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်
Qualcomm မှ Android အတွက် SDK ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဆုမှာဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်
မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်လျှောက်လွှာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Professional Expert Course
UNED မှစီစဉ်သောမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအပလီကေးရှင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်
Android6ဖြင့် CyanogenMod 2.2 တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုအမျိုးမျိုးသောဆိပ်ကမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည်
CyanogenMod 6.0 ကို၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းတွင် Nexus One, Htc Magic သို့မဟုတ် Htc G1 စသည့်စက်ပစ္စည်းအချို့အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Dell Aero Android terminal ကိုယခုအခါ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်
Dell Aero terminal ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ AT&T operator မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ
Polaroid PoGo3× 4၊ ဓာတ်ပုံများကိုသင်၏ Android မှတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ပါ
Polaroid 3x4 နှင့်၎င်း၏ Android application နှင့်အတူဖုန်းမှပုံတစ်ပုံကိုပရင်တာသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သည်။
Kaspersky သည် Android တွင် Trojan တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းသည် antivirus suite၊ တိုက်ဆိုင်မှုကိုကြေငြာပါသလော
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ် Kaspersky က Android ပလက်ဖောင်းတွင် Trojan တစ်ခုရှိပြီး၎င်းင်း၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆန့်ကျင်တိုက်ဆိုင်မှုအားကြေငြာသည့်အနေဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်။
Nexus One ကို ADP3 လို developer များအတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Nexus One ကို developer များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ developer account မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
Viper ဆိုသည်မှာ Android terminal မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားထဲတွင်လုပ်ဆောင်မှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Android အတွက် Live Wallpapers အားလုံးသည် website တစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်
Android Terminal များအတွက် Wallpapers များနှင့်၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။
Android အတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခု၊ 7x7x7 Rubik's Cube ကိုဖြေရှင်းပါ
Android အတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခု၊ 7x7x7 Rubik's cube ကိုဖြေရှင်းရန်၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
သင့်ကားဒိုင်ခွက်ပေါ်တွင် Android ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားသည်
Droid Incredible ရှိသည့် TV output မှတစ်ဆင့်၎င်းကိုကားတစ်စီး၏ဒိုင်ခွက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Android တွင်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်။
Viafirma က Android မှာဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်တွေသုံးနိုင်ပါတယ်
Viafirma သည် Android တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုသုံးနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
App Inventor၊ ဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာမသိဘဲကိုယ့် Android application တွေကိုဖန်တီးပါ
Google က Android အတွက် Inventor App ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ။ သူကငါတို့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်တွေဖန်တီးဖို့စိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် Android applications တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။
Android 2.2 ကိုသင်၏ Htc Magic သို့မဟုတ် Htc G1 / Dream တွင်တပ်ဆင်ပါ
Cyanogen Mod သည်၎င်း၏ Android 2.2 ဗားရှင်းကို Htc Magic နှင့် Htc G1 / Dream ကိရိယာများအတွက်သာထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Android 2.1 update ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Acer Liquid အတွက် Android 2.1 update ကိုယခုရရှိနိုင်သည်
Sony Ericsson Media Go, သင်၏ Xperia ကိုသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်စည်းညှိပါ
Sony Ericsson Media Go သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Xperia terminal ဖြစ်သော Xperia X10 သို့မဟုတ် Xperia Mini တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့် suite တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
QR ကုဒ်များ၊ ၎င်းတို့အတွက်မည်သည်တို့နှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုရှင်းပြခြင်း။
စျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်ဖြင့် Samsung Galaxy S ကိုရယူပါ
စပိန်နိုင်ငံတွင် Samsung Galaxy S ကိုစတင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အတူဤ terminal ကိုပုံမှန်စျေးနှုန်းထက်ဝက်သာရနိုင်သည်။
Super Mario Bross ကို Android ဖုန်းတွင် animated wallpaper အဖြစ်ထားပါ
XDA မှ စ၍ စကြဝuniverseာတွင်အကျော်ကြားဆုံးရေပိုက်သမား Mario Bross ၏ကာတွန်းနောက်ခံများပါရှိသည်။
သင်၏ Android တွင် Samsung Galaxy S ကာတွန်းနောက်ခံကိုထည့်ပါ
Samsung Galaxy S ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနောက်ခံကို Android terminal အားလုံးနီးပါးတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်
Android စုရုံးမှုများ၊ Anderwebs ယနေ့
ဒီနေ့မှာ Android မှာလူသိများတဲ့လူသိများတဲ့ ADW.Launcher developer Anderwebs နဲ့အတူရှိပါတယ်
Orange 2.1 Htc Hero အတွက် Android XNUMX update၊ ပြင်သစ်အတွက်လမ်းပြမြေပုံ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Android 2.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ရက်များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏ Htc Hero ဆိပ်ကမ်းများအတွက်လမ်းပြမြေပုံလာသည်
Samsung Galaxy S ကို Movistar နှင့်ဇူလိုင်လတွင်ယူရို ၀.၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Samsung Galaxy S ကိုလာမည့်ဇူလိုင်လတွင် Movistar ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
HTCManía Launcher၊ htcmaniac များအတွက် Android application
Htcmanía Launcher သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android desktop မှ Htc ဆိပ်ကမ်းရှိအထူးပေါ်တယ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ADW. Launcher, သင့် desktop မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းပါ
ADW.Launcher သည်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးချပရိုဂရမ်များပိုမိုပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ application launcher ၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
T-Mobile မှ MyTouch 2.2g ၏ Android3ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုအတည်ပြုသည်
T-Mobile မှ MyTouch 3G terminal သည် Android 2.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
EyeSight ကင်မရာရှေ့တွင်အမူအယာများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ Android ကိုထိန်းချုပ်ပါ
EyeSight သည်နည်းပညာကိုတီထွင်နေပြီးကင်မရာရှေ့တွင်အမူအယာများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Android ကို ၁ စက္ကန့်အတွင်း boot လုပ်နိုင်တဲ့ software အသစ်
QuickBoot သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆဲဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား Android terminal ကို ၁ စက္ကန့်အတွင်းစတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Google TV၊ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာနဲ့ဗီဒီယိုကိုသရုပ်ပြပါ
Google မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး Google I / O တွင်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Google TV ၏တင်ဆက်မှုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။
Android အတွက် Adobe Reader ကိုရပြီ
Adobe Reader, pdf ဖိုင်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ခွင့်ပြုသည့်လူကြိုက်များသော application သည်ယခုအခါ Android Market တွင်ရနိုင်သည်
Wikitude Drive၊ တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်သည် GPS သို့ရောက်ရှိသည်
Wikitude Drive သည်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုအညွှန်းစနစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
Gameloft သည် Android အတွက်ဂိမ်း ၁၀ မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သည်
Gameloft သည် Android platform အတွက်ဂိမ်း ၁၀ မျိုးကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
Android စုရုံးမှုများ၊ ယနေ့အစ္စရေးနှင့် Luis de Bubiloop and.roid.es
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Bubiloop နှင့် and.roid.es အတွက်တာဝန်ရှိသည်Israelသရေလနှင့် Jose Luis နှင့်စကားပြောမည်
Task Tray၊ နောက်ခံမှာရှိတဲ့ application တွေကိုစီမံပါ
Task Tray ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ခံရှိအပလီကေးရှင်းများကိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာစီမံပြီးပိတ်နိုင်သည်
Wiimote Controller၊ သင်၏ Android တွင်ကစားရန် Wii Remote ကိုသုံးပါ
Wiimote Controller သည်သင်နာမည်မှမြင်နိုင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Android ရှိဂိမ်းအချို့ကိုထိန်းချုပ်ရန် Wii အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Google Goggles သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသောအရာကိုဘာသာပြန်ပေးသည်
Google Goggles ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံနှိပ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုဘာသာပြန်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Android စုဝေးမှုများ။ ယနေ့ Inizziativa မှ Juan Carlos Viota
ဒီကနေ့မှာငါတို့နှင့်အတူ Inizziativa အဖွဲ့မှ Juan Carlos Viota ရှိသည်။
Rom Cyanogen ကို Android 2.1 ဖြင့် Htc G1 နှင့် Htc Magic တို့တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Cyanogen သည်၎င်းတို့၏ rom ကို Android 2.1 ဖြင့် Htc G1 နှင့် Htc Magic အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
Open Source မြေပုံကြည့်သူ GvSig mini သည် Android သို့လာသည်
gvSIG Mini သည်ကြွေပြားများပေါ်တွင်အခြေခံသောအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မြေပုံများအတွက်အခမဲ့ကြည့်ရှုသူဖြစ်သည် (OpenStreetMap, YahooMaps, Microsoft Bing, ... )
Skyfire 2.0 ကို Android အတွက်ရနိုင်သည်
Android အတွက် Skyfire 2.0 ကိုရပြီ
Android စုရုံးမှုများ၊ ယနေ့Raúl Romero alias BgTA
ဒီနေ့ Android စုဝေးမှုတွေမှာ BgTA အတွက်လူသိအများဆုံးRaúl Romero ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်းသော HTC Desire
ကျွန်ုပ်တို့က HTC Desire Desire ကိုရက်အနည်းငယ်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်ခံစားချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးသည်။
Compaq Airlife 100 HP ၏ Android netbook ကို Movistar တွင်ရရှိနိုင်သည်
Movistar ပါ ၀ င်သည့် HP ၏ Android netbook, Compaq Airlife 100
Zeemote မှ၎င်း၏ Android SDK ကိုလွှတ်တင်
Zeemote သည် SDK ကို Android terminals များအတွက်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး developer များအနေဖြင့်၎င်း command နှင့်လိုက်ဖက်သော application များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Android အတွက်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ကီးဘုတ်ဖန်တီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အတွက်ကိုယ်ပိုင်ကီးဘုတ်ကိုအလွန်လွယ်ကူစွာဖန်တီးနိုင်သည်
Android စုရုံးမှုများ၊ ယနေ့ Yeradis Barbosa နှင့်အတူ
Android နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမည့် developer Yeradis Barbosa နှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
သင့်ရဲ့ Android မှာ Spectrum ကိုတုပပါ
terminal တွင် Spectrum emulator ကိုတပ်ဆင်ပြီးလက်ရှိဂိမ်းအချို့နှင့်ပါ ၀ င်သည့် Xpectroid 1.0
၂၀၁၁ Ford Fiesta သည် Android နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Ford သည် ၂၀၁၁ Ford Fiesta model သည် Android application များနှင့် terminal များနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
Huawei C8600 ကို Android 2.1 ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်
Huawei C8600 ကိုယနေ့တရုတ်ပြည်တွင် Android 2.1 နှင့်ပါ ၀ င်သည့်ထူးခြားမှုကိုပြသခဲ့သည်
SMS အရန်ကူးခြင်း၊ သင်၏ sms ကိုသင်၏ဂျီမေးလ်အကောင့်တွင်သိမ်းပါ
SMS Backup ဖြင့် sms များကိုမိတ္တူကူးယူနိုင်ပါပြီ
Application ကို Market, Apple VS Android သို့တင်ရန်အဆင့်များ
အဓိကလျှောက်လွှာဈေးကွက်နှစ်ခုဖြစ်သော Android Market နှင့် App Store သို့လျှောက်လွှာတင်ရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များနှင့်အတူဇယားကွက်
CallTrack, ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းကို Google Calendar နှင့်ညှိပါ
CallTrack သည်ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်တွင်ခေါ်ဆိုမှုများ၊ လွဲချော်မှုများအားလုံးကိုပြသရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Xda-developer များကသူတို့၏ Android application ကိုစတင်ခဲ့သည်
Web xda-developer များက Android ဆော့ဝဲလ်များအတွက်၎င်း၏ application ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
တိရိစ္ဆာန်ဘာသာစကားဖြင့်ဘာသာပြန်သူ Google သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထပ်မံအံ့အားသင့်စေသည်
android အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကြောင့် Google ဟာတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုဘာသာပြန်ပေးတယ်
Sony Ericsson Xperia X10 Vodafone Spain နှင့်စျေးနှုန်းများ
စပိန်နိုင်ငံရှိ Vodafone နှင့်ဆိုလျှင် Sony Ericsson Xperia X10 ၏စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မှာထားပြီးဖြစ်သည်
J2Android, Android တွင် ".jar" ဖိုင်များကို run ပါ
Myriad ကုမ္ပဏီသည် ".jar" ဖိုင်များကို ".apk" ဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲသည့် J2Android application တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
Htc Tattoo သို့ root access ရယူနည်း
Htc Tattoo ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် root access ရယူရန်လက်စွဲ။
Android-Sync, Microsoft Outlook ကို Android နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ
Android-Sync ဖြင့် Microsoft Outlook ကို Android နှင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်
Wallpaper Rotator၊ သင်၏ Android desktop ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းပါ
Wallpaper Rotator သည် Android terminal ၏ desktop နောက်ခံကိုစက္ကန့် ၃၀ မှအပတ်တိုင်းအထိပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Zumodrive, Android အတွက်အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှု
Zumodrive သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ 1Gb ကွန်ယက်တွင် 2Gb သို့ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးအထူးလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုသည်
Zgzbus, Zaragoza ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား Android
ZgzBus သည် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး Tuzsa (Transportes Urbanos de Zaragoza) မှအချို့သောမှတ်တိုင်သို့ရောက်သည့်အခါစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
Fildo, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော MP3 များကိုသင်၏ Android သို့ download လုပ်ပါ
Fildo ဖြင့် MP3 ကိုကျွန်ုပ်၏ micro SD ကဒ်သို့တိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်ပါသည်
T-Mobile Htc G1 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်
T-Mobile Htc G1 ဆိပ်ကမ်းများသည် software update ကိုလက်ခံရရှိနေသည်။
Scoreboard နှင့် News နှင့်အတူ Fotmob၊ သင်၏ Android ပေါ်တွင်ဘောလုံးအားလုံး
Fotmob သည် Scoreboard နှင့် News တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal မှဘောလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုလိုက်နာရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှကိုပေးလိမ့်မည်
Android အတွက် Opera Mini5ကို Android Market တွင်ရနိုင်သည်
Android အတွက် Opera Mini5ကို Android Market တွင် download ရယူနိုင်သည်
Android terminal များအတွက် e-reader တစ်ခုဖြစ်သော Aldiko
Android အတွက် Aldiko သည် e-reader သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ဖတ်စက်ဖြစ်သည်။ Android Market တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်
Android NDK r3 ကိုရပြီ
Android NDK r3 ကို developer များအနေဖြင့် OpenGL ES 2.0 ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
သင်၏ Android တွင်ချက်ပြုတ်စာအုပ်၊ ၂၅၀၀ ချက်ပြုတ်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများ
Recipe စာအုပ်သည် Android terminal တွင်ချက်ပြုတ်မှုချက်ပြုတ်နည်း ၂,၅၀၀ ကျော်ပါသော application တစ်ခုဖြစ်သည်
သင်၏ android ရှိ RAC1 ကိုနားထောင်ပါ
Android အတွက် RAC1 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများရှိဤဘူတာကိုကျွန်ုပ်တို့နားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်
Raging Thunder 2, သင်၏ Android အတွက် 3D ကားပြိုင်ခြင်း
Raging Thunder2သည် 3D ကားပြိုင်ပွဲဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Android Market ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းသို့မဟုတ်ယနေ့ပင်ဖြစ်သင့်သည်။
Xbox 360 Android အတွက် Live
Xbox 360 Live for Android သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ပရိုဖိုင်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဂိမ်းများနှင့်ဂိမ်းကတ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Recordoid၊ မင်းရဲ့ Android ကို recorder အဖြစ်ပြောင်းပါ
Recordoid ဆိုတာ Android Market မှာရရှိနိုင်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပြီး Android ဖုန်းကို recorder အဖြစ်ပြောင်းပေးပါတယ်
Nexus One ကသူ့ရဲ့ Processor Speed ​​ကို 9Ghz အထိတိုးမြှင့်ပေးတယ်
9 Ghz သည် Snapdragon ကို Nexus One တွင်အသုံးပြုထားသောအမြန်နှုန်းဖြစ်သည်
Aptoid ။ သင့်ရဲ့ Android application ထဲကို application repositories ထည့်ပါ
Aptoide သည် android အတွက် application တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင် Linux တွင်ကဲ့သို့ application repositories ထည့်နိုင်သည်
Recognizr, Android တွင်လူများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်
HTC Desire, MWC ၂၀၁၀ တွင်စမ်းသပ်ခြင်း
Mobile World Congress တွင် HTC Desire သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်
Htc Legend နှင့် Htc Desire တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
ယနေ့ Htc သည်၎င်း၏ Android ကြယ်ပုံစံ ၂ ခုဖြစ်သော Htc Legend နှင့် Htc Desire တို့ကိုတင်ပြခဲ့သည်
Adobe Air သည် Android သို့လာသည်
Android တွင် Adobe Air ကိုမကြာမီပြုလုပ်တော့မည် Android သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသို့ဤနည်းပညာကို Android မှစတင်တင်ပို့ရန်အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့သည်။
Xperia X10 Mini နှင့် Xperia X10 Mini Pro တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Mobile World Congress မတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင် Sony Ericsson သည် Android စနစ်ဖြင့် Xperia X10 Mini နှင့် Xperia X10 Mini Pro စသည့်ဖုန်းအမျိုးအစားများစွာကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Rovio, Android စက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအခြားစက်ရုပ်
Rovio ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ Application တစ်ခု။
Android platform အတွက်ရရှိနိုင်သည့် MPEG-4 HE-AAC v2 နှင့် MPEG Surround တို့ကိုအသံနည်းပညာအသစ် ၂ ခုကိုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။
Android system သည်၎င်း၏အမြန်နှုန်းကိုသုံးဆတိုးလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရမည်
Myriad Group ဟုခေါ်သော Open Handset Alliance ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကုမ္ပဏီသည် Dalvik ဟုခေါ်သော Android ကိုအသုံးပြုသော virtual machine ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပုံရသည်
Swype သည် Android တွင်စာရိုက်နှုန်းကိုတိုးစေသည်
Swype သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ virtual keyboard ကိုအစားထိုးသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကိုသက်သာစေသည်
Merchandising Android ကိုလာပါတယ်
ချစ်စရာ Android အရုပ်မျိုးစုံသည်လကုန်တွင်ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ဘယ်ဟာကိုပိုနှစ်သက်လဲ
Gen.Y DualBoot သည်သင်၏ ၀ င်းဒိုးစက်ပေါ်တွင် dual boot ကိုပေးသည်
Gen.Y DualBoot ဆိုသည်မှာ ၀ င်းဒိုးမိုဘိုင်း (သို့) Android နှင့်သုံးလျှင် terminal ကိုစတင်ရန် system နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်
Nexus One ကိုသုံးပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါနိဂုံးချုပ်ပါတယ်
တိုင်းပြည်အားဖြင့် Android app စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်
နိုင်ငံများအလိုက် Android Market application များ၏စျေးနှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Shop4apps, Motorola application store သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
Motorola ကသူ့ရဲ့ Android Store အတွက် Shop4apps စတိုးကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်။
သင်၏ Android ပေါ်ရှိ Discovery Channel
ဒက်ဗ်ဝဲလ် (လ်) သည်၎င်း၏ပရိုဂရမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက် Android ဆော့ဝဲလ်များအတွက် application တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
CNN ချီလီ Android ဝစ်ဂျက်
၎င်းသည် CNN ချီလီမှသတင်းဝစ်ဂျက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်။ ချီလီ CNN ၏ဝစ်ဂျက်မှသတင်းအမျိုးအစား ၇ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်၏တီဗီလမ်းညွှန်၊ သင်၏ Android ပေါ်ရှိရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ
My Tv Guide နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားပရိုဂရမ်များအားလုံးလက်ညှိုးထိုးပြလိမ့်မည်
Android 2.0.1 မှာလုံခြုံရေးပြproblemနာရှိတယ်
လုံခြုံရေးပြproblemနာကို Android 2.0.1 ဗားရှင်းတွင်တွေ့ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Motorola Droid terminal အားလုံးနီးပါးရှိသည်
Ford Sync App, Android နှင့် Ford နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
Ford Sync App သည်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး developer များအနေဖြင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို Bluetooth ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူနိုင်သည့် application များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
DoubleTwist, iTunes, ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Android ဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ
DoubleTwist ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကို iTunes၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းများကိုရယူနိုင်မည့် desktop application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Nexus One၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Engadget မှ Nexus One ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။
Android ရှိသင်၏မြို့ပြအပန်းဖြေရှာဖွေရေးအင်ဂျင် Bliquo
Bliquo သည်မြို့ပြအပန်းဖြေခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးပေးသူများထံမှထိုကဲ့သို့သောဖမ်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၁၁၈၇၀ တို့ကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်လက်လွတ်မသွားစေရန်စုဆောင်းသည်။
Missing Sync၊ Android နှင့် PC များအကြားစုစုပေါင်းညှိခြင်း
Missing Sync ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android နှင့် pc အကြားအဆက်အသွယ်များကို ၀ ိုင်ဖိုင်မှတဆင့်ထပ်တူပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Android device နှင့် pc အကြားဂီတ၊ ဖိုင်များ၊ ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများကို USB မှတစ်ဆင့် USB မှတဆင့်ကူးပြောင်းနိုင်သည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။
GREYSTRIPE, Android အတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု
Greystripe သည် Admob ၏ Android terminal များအတွက်ပြိုင်ဘက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ iPhone သို့မဟုတ် Java ပလက်ဖောင်းအတွက်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများတွင်ကြော်ငြာခြင်းကိုပေးသောဤကုမ္ပဏီသည် Android စနစ်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန် developer များအနေဖြင့်၎င်း၏ SDK ကိုရရှိနိုင်စေသည်။
သင်၏အသားတင်လစာသည်စုစုပေါင်းအပေါ်အခြေခံသည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ အကယ်၍ သင်၏လစာသည်ယူရို ၃၀၀၀ အထက်သို့တက်ပါကသင်၏လစာသည်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ စပိန်နိုင်ငံတွင်အခွန်ပေးဆောင်ပြီးနောက်သင်၏လစာကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည့်ရိုးရှင်းသောလျှောက်လွှာ။ ၂၀၀၉ မှနောက်ဆုံးရ
မိုဘိုင်း၊ Android နှင့် Windows မိုဘိုင်းပေါ်တွင် VMWARE တူညီသောအချိန်တွင်
ကုမ္ပဏီ VMware သည် operating systems virtualization တွင်အထူးကျွမ်းကျင်သည်။ ဤနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုသာရည်ရွယ်သည်။
ULTIMATEFAVES နှင့် 3D CAROUSEL မှ Desktop Desktop
UltimteFaves ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်သုံးသော application များ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကို 3D carousel mode ထဲထည့်နိုင်သည်။
နက်ရှိုင်းမှုအတွက် MOTOROLA MILESTONE သုံးသပ်ချက်
Android 2.0 ကိုအသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသော terminal ဖြစ်သော Motorola Milesotne သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးစေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လှပသော WIDGET အသစ်တီထွင်ထားသော Widget များ
Beautiful Widget ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android desktop အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဝစ်ဂျက်အချို့ရှိသည်
BLUETOOTH FILE TRANSFER ANDROID'S BLUETOOTH ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
Bluetooth File Trasnfer သည် Bluetooth မှဖိုင်များပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ဒီ application ကို Android Market မှာရနိုင်ပါတယ်။
ANDROID GPS NAVIGATION SYSTEM
ArcheMind ကုမ္ပဏီသည် Yokohama ရှိ Embedded Technology 2009 ပြပွဲတွင် GPS Navigation ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကို Android စနစ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ယာဉ်၏ဒိုင်ခွက်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
WEBSDK၊ Android နှင့် SYMBIAN အတွက် APPS ဖန်တီးခြင်း
Sony Ericsson သည် Android နှင့် Symbian နှစ်ခုစလုံးအတွက် application များတီထွင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် WEBSDK ကိရိယာတစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Admob မှစက်တင်ဘာလအတွက်စာရင်းဇယားများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအထင်ရှားဆုံးထားခဲ့ပါ
နောက်ကျောရှိ HTC tattoo
Htc မှနောက်ဆုံးပေါ် Android terminal မှာပြည်ပ၌ပင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော Htc Tattoo ဖြစ်သည်။
MOBILEFLEET, ANDONID MONITORS VEHICLE FLEETS
Mobilefleet ကြောင့် Android သည်စပိန်စီးပွားရေးလောကသို့ရောက်လာသည်။ အန်းဒရွိုက်တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application တစ်ခုဖြင့်သင်ရနိုင်သည်။
Android အတွက် Adobe ဓာတ်ပုံ
Photoshop သည်ဓာတ်ပုံ retouching application များ၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင် Android terminal များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
BROWSER IGO FRIEND ANDROID လည်း
igo Amigo navigation software သည် Android platform သို့ရောက်သည်။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ browser ကို၎င်း၏စိတ်ကူးဂရပ်ဖစ်လူသိများသည်။
Android 2.0, သတင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
Android 2.0 SDK ရရှိပြီဆိုတာနဲ့ဖက်ရှင် operating system ကကျွန်တော်တို့ကိုယူဆောင်လာမယ့်အင်္ဂါရပ်တွေအားလုံးကိုသိနိုင်တယ်။
သင်၏ Android ဖုန်းသို့အရန်ကူးခြင်းများပြုလုပ်နည်း
MyBackup ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များ၌အရန်ကူးယူခြင်းများကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်
Astro FILE ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်
Astro File Manager အက်ပလီကေးရှင်းသည်မည်သည့် Android terminal တွင်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမွမ်းမံပြီးနောက်တွင် ပို၍ ပင်ပြုလုပ်သည်
TROVIT CASAS၊ သင့် Android ကုမ္ပဏီ၏အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ
သင်၏လျှောက်လွှာများအားလုံးကို APPMANAGER, စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှု
AppManager သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android es များပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရမည့်အခြေခံအကျဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Android၊ GPS Navigator
Gps လမ်းညွှန်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်သည် Android လောကသို့ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းမှာ Sygic ဖြစ်သည်။
MOTOROLA ဖုန်းဆိပ်ကမ်း, ဝိုင်ဖိုင်မှတဆင့်သင်၏ Android အားလုံးကိုထိန်းချုပ်
Motorola ဟာတကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Moto Phone Portal ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီ။ ၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာမှကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများ၊ ပြက္ခဒိန်မိတ္တူကူးခြင်း၊ ဖိုင်များ၊ SMS ပို့ခြင်း၊ ပုံရိပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းများကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
လေယာဉ်ပေါ်တွင်သင်၏ Android ကိုကွန်ယက်ယူနစ်သို့လှည့်ပါ
On Air ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကဒ်ကိုကွန်ယက်ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် Wifi မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်
APPS ORGANIZER၊ သင်၏ Android ပေါ်တွင်လျှောက်လွှာများကိုစီစဉ်ပေးသည်
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော application အရေအတွက်တိုးများလာပြီး၎င်းတို့အားရှာဖွေရန်မှာအနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ Apps Organize သည်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားသော applications များအားလုံးကိုစီစဉ်ရန်ကူညီသည်။
ဆလိုက်, ALTERNATIVE ANDROID စျေးကွက်
SlideMe သည် Android Market ဖြစ်သော်လည်းတရားဝင်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေသည့် application များနှင့်ဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင် HTC HERO ရရှိနိုင်ပါသည်
Htc Hero အတွက် update ကိုယခုရပြီ။ ၎င်းကိုတရားဝင် Htc စာမျက်နှာမှကူးယူနိုင်သည်
နောက်ခံ Android အတွက် Facebook
Android Terminal များအတွက် Facebook application သည်၎င်းသည်မည်သို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရအောင်။
Android ဖုန်းပေါ်တွင် RECOVERY အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ငါတို့အားလုံးနီးပါးဟာ recovery mode၊ ALT + s ကိုနှိပ်ခြင်း၊ wipe လုပ်ခြင်းစတာတွေအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးပြီ။ အချို့အရာများကိုရှင်းလင်းပြီးအခြားသူများကို install လုပ်မယ်
Android Android အတွက် android Android အတွက် Facebook App app ရှိသည်
မနေ့ကကတည်းက Android Terminal များအတွက် Facebook application ကို Android Market တွင်ရနိုင်သည်။
NEBUDROID သည်သင်၏ console ကို Android နှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်
Nebudroid နှင့်သင်၏ Android terminal ကို Nes console ၏နောက်ထပ် command တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်ကစားရန် Accelerometer နှင့် Touch Screen ကိုသုံးနိုင်သည်
ANDROID နှင့်အတူ SONY ERICSSON XPERIA X5 (NADINE)
Sony Ericsson Xperia X5 အမည်ရှိ Android terminal နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလသတင်းများ Nadine သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာမှတစ်ဆင့်ပြေးသွားသည်။
Android နှင့် LINUX, အယူအဆ
ဒီနေ့ Linux နဲ့ Android အကြောင်းနည်းနည်းသင်ခန်းစာယူတော့မယ်။ ဤသည်အလွန်ပြည့်စုံစေ့စပ်မဟုတ်သလိုအလွန်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည် ...
မျက်မမြင်, တီထွင်သူများအတွက်လည်း Android
Blind ဆိုသည်မှာမျက်မမြင်များက Android terminal များကိုအသုံးပြုရန်အထူးပြုလုပ်ထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည်
Android နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများ GO 2.0 သို့သွားရန်
Word, Excel, PowerPoint နှင့် PDF စာရွက်စာတမ်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော Documents to Go လျှောက်လွှာ၏ဗားရှင်း 2.0 ကိုယခု Android Market တွင်ရနိုင်သည်။
HTC Access တွင်အမြန်ဆက်သွယ်မှုကိုဘယ်လိုရယူမလဲ
Htc Hero ကို root access ရဖို့လက်စွဲ။
HTC MAGIC နှင့် SPL တပ်ဆင်ခြင်းအပေါ်အမြန်ဆက်သွယ်မှု
Htc Magic တွင် root access ရရှိနိုင်ပုံနှင့်နောက်ပိုင်း rom ပြောင်းလဲမှုအတွက် Haykuro SPL အသစ်ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကို Manul
ANDROID ON GOOGLE Voice ဟာအခုတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ
Android Market မှ Android အတွက် Google Voice application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့်အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာသာအလုပ်လုပ်သည်
Android အတွက်, COPILOT သည်အသက်ရှင်
Android အတွက် Copilot Live ကိုယခု Android Market တွင်ရနိုင်သည်။ ဤ operating system အတွက်ပထမဆုံး GPS navigator ဖြစ်သည်
DONUT, ECLAIR AND NEXT Android သုံးသပ်ချက်များ
Android မှာ Donut, Eclair နဲ့ Flan ဆိုတဲ့ update အသစ်သုံးမျိုးကိုရရှိမှာပါ။ Facebook နှင့် Twitter ကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ယက်များတွင် Android ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်
အန်ဒရွိုက်သည်စွမ်းဆောင်ရည် (သို့) ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
Touchscreen မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေမှာအရေးကြီးဆုံးကွာခြားချက်တစ်ခုကတော့ capacitive ဖြစ်စေ resistive ဖြစ်စေ screen အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Android အတွက် LAYAR, သင်၏လက်၌တမြို့လုံး
Layar, ငါတို့လက်ဖ ၀ ါးရှိမြို့တစ်မြို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ Android အတွက်ဝေါလ်ပေပါများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ android terminal တွင်နေရာချရန်နောက်ခံပုံများ
ဘားကုတ်စကင်နာ၊ QR နံပါတ်များကိုဖတ်ရှုရန်ဖန်တီးခြင်း
ဖုန်း cache ကို SD သို့ရွှေ့ပါ
HTC MAGIC တွင်အမြန်ဆက်သွယ်မှုကိုဘယ်လိုရယူမလဲ
https://www.androidsis.com/acceso-root-en-htc-magic-e-instalacion-del-spl/ တွင်မွမ်းမံထားသောလက်စွဲကိုစတင်ရန်ဤအရာသည်ဤနေရာတွင်တင်ထားသောလက်စွဲစာအုပ်၏အခမဲ့ဘာသာပြန်ကျမ်းသာဖြစ်ကြောင်းသင့်အားပြောပြပါ။ အရာအားလုံး…
Ahome, ငါတို့ရဲ့ Android ကိုစိတ်ကြိုက်
Ahome သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ဖန်သားပြင်၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android နှင့် OUTLOOK ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ
Outlook ကို Google Calendar နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်း
T-Mobile G1 ပေါ် rool ၀ င်ရောက်ပုံကို
android နှင့်အတူ G1 မှ root access ကို enable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလမ်းညွှန်
မကြာသေးမီကစပိန်နိုင်ငံတွင် Movistar မှ Htc Deam နှင့် Vodafone မှ Htc Magic တို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက် Android Market သည်ယခုအခါအခမဲ့ application များကိုထုတ်ဝေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။